Galmudug Oo Yeelatay Ku Dhowaad 200 Oo Xildhibaan | Entertainment and News Site
Home » News » Galmudug Oo Yeelatay Ku Dhowaad 200 Oo Xildhibaan
daajis.com:- Sida uu qabay heshiiska Galmudug iyo Ahlu Sunna waxaa la isku daray baarlamaannada labada dhinac kuwaas oo tiro ahaan gaaraya 195, sidaasi waxaa Goobjoog News u sheegay ilo xog-ogaal ah.
Tirada uu hadda u taagan yahay baarlamaanka Galmudug waa isku darka: 89 ka timid baarlamaankii Galmudug iyo 106 ka imaaneysa maamulka Ahlu-sunna, iyada oo tirada guud ahaan-doonto 195 Xildhibaan.
Marka laga soo tago fara-badnida tirada Xildhibaannada Galmudug, cabashada ka jirta in ay ku jiraan Xildhibaanno ka soo jeeda maamullo kale, sida iyo qaabka loo maareynayo shirarka iyo kalfadhiyada baarlamaanka cusub, waxaa intaas dheer dhibaato la xiriirta halka looga keenayo mushaar iyo gunno joogta ah.
Xildhibaan Garaad Yusuf Maxamud oo arrintan Goobjoog News kala hadlay waxaa uu sheegayaa in aan laga fakarin sidii loo dhisi lahaa hay’adaha, loona awood-siin lahaa shaqaalaha dowliga ah.
“ Waxaa muuqata in dhismaha baarlamaankan aan laga fiirin sidii Hay’adihii u shaqeyn lahaayeen, oo xildhibaankana xuquuqdii u baahnaana u helo,”
In kasta oo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf shalay sheegay in kalfadhiga baarlamaanka uu furan yahay, horayna loogu sheegay in Cadaado fadhi u noqoto, hadana xildhibaannada qaar ma hubaan halka kulamada ka dhacayaan.
Warar ay heshay Goobjoog News ayaa sheegaya in maalmaha soo socda la qaban-doono xaflad lagu shaacinayo tirada guud ee baarlamaanka Galmudug, qaabka iyo farsamada loo dhameystirayo howlaha ka dhiman sidii Galmudug u yeelan laheyd hal maamul oo ka shaqeeya danta deegaanka.